Yini i-API, REST, SOAP, XML, JSON, WSDL nezinye izincazelo
NgoLwesine, Septhemba 24, 2015 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 8, i-2017 Douglas Karr
Uma usebenzisa isiphequluli, isiphequluli sakho senza isicelo kusuka kuseva yamakhasimende futhi iseva ithumela amafayela emuva lapho isiphequluli sakho sihlangana futhi sibonise ikhasi lewebhu. Kepha kuthiwani uma ufuna i-server yakho noma ikhasi lewebhu likhulume nenye iseva? Lokhu kuzodinga ukuthi uhlele ikhodi ku-API.
Yini eyenza API imele?
I-API isichazamazwi se- UHlelo Lobhalomfihlo. an API iqoqo lemizila, izivumelwano, namathuluzi wokwakha izinhlelo zokusebenza ezinikwe amandla iwebhu nezisuselwa kuselula. I- API icacisa ukuthi ungayigunyaza kanjani (ngokuzithandela), ucele futhi wamukele idatha kusuka ku- API iseva.
Lapho isetshenziswa kumongo wokuthuthukiswa kwewebhu, i API imvamisa isethi echaziwe yemiyalezo yesicelo se-Hypertext Transfer Protocol (HTTP), kanye nencazelo yesakhiwo semilayezo yokuphendula. Ama-API wewebhu avumela ukuhlanganiswa kwezinsizakalo eziningi kuzinhlelo zokusebenza ezintsha ezaziwa ngokuthi ama-mashups.Wikipedia
Incazelo yevidiyo yalokho okwenziwa ngama-API
Kukhona izivumelwano ezimbili eziyinhloko lapho kwenziwa i-API. Izilimi ezihlelekile ezihlelekile njengeMicrosoft .NET nabathuthukisi beJava bavame ukukhetha i-SOAP kepha umthetho olandelwayo owaziwa kakhulu yi-REST. Ngokufana nokuthayipha ikheli kusiphequluli ukuze uthole impendulo, ikhodi yakho idlulisa isicelo ku- API - ngokoqobo indlela eseva eqinisekisa futhi iphendule ngokufanele nedatha oyicelile. Izimpendulo ze-SOAP ziphendula nge-XML, ebukeka ifana ne-HTML - ikhodi esetshenziswa yisiphequluli sakho.
Uma ungathanda ukuhlola ama-API ngaphandle kokubhala umugqa wekhodi, I-DHC ine okuhle Isicelo se-Chrome ngokusebenzisana nama-API nokubona izimpendulo zawo.
Yini emele i-Acronym SDK?
I-SDK isichazamazwi se- Ikhithi Yonjiniyela weSoftware.
Lapho inkampani ishicilela i-API yayo, kunemibhalo evame ukuhambisana ekhombisa ukuthi indlela ye- API iyaqinisekisa, ingabuzwa kanjani, nokuthi yiziphi izimpendulo ezifanele. Ukusiza onjiniyela ukuthi baqale kahle, izinkampani zivame ukushicilela ifayela le- Ikhithi Yonjiniyela weSoftware ukufaka isigaba noma imisebenzi edingekayo kalula kumaphrojekthi abhalwa wonjiniyela.
Imeleni i-Acronym XML?
I-XML isichazamazwi se- Ulimi lwe-eXtensible Markup. I-XML ulimi lwemakhaphu olusetshenziselwa ukufaka idatha ngefomethi efundeka kalula futhi ifundwe ngomshini.
Nasi isibonelo sendlela i-XML evela ngayo:
<?xml inguqulo ="1.0"?>
Yini emele i-Acronym JSON?
Nasi isibonelo sedatha engenhla usebenzisa i-JSON:
"isihloko": "Umkhiqizo A",
"incazelo": "Umkhiqizo wokuqala",
Ngabe i-Acronym REST imeleni?
REST yisichasiso segama le- Ukudluliswa Kwezwe Elimele isitayela sokwakhiwa kwezinhlelo ze-hypermedia ezisatshalalisiwe. Uqanjwe nguRoy Thomas Fielding
Hawu… umoya ojulile! Ungafunda yonke iziqu lapha, ebizwa nge-Izitayela Zokwakha kanye ne-Design of Network-based Software Architectures ethunyelwe ngokweneliseka okulingene kwezidingo zezinga lika-DOKOTELA WEFILOSOPHI ku-Information and Computer Science ngo URoy Thomas Fielding.
Siyabonga uDkt. Fielding! Funda kabanzi mayelana I-REST eWikipedia.
Imelelani i-Acronym SOAP?
I-SOAP isichazamazwi se- Iphrothokholi Yokufinyelela Into elula
Angiyena umqambi wohlelo, kepha ngokombono wami abathuthukisi abathanda i-SOAP bakwenza lokho ngoba bangathuthukisa kalula ikhodi kusixhumi esibonakalayo sohlelo olufunda ifayili leWeb Service Definition Language (WSDL). Akudingeki badlulise impendulo, sekuvele kufezekile kusetshenziswa i-WSDL. I-SOAP idinga imvilophu yohlelo, echaza ukwakheka kwemiyalezo nokuthi ingacutshungulwa kanjani, isethi yemithetho yokufaka ikhodi yokuveza izimo zamadatha wedatha achazwe ngohlelo kanye nomhlangano wokumelela izingcingo zezinqubo nezimpendulo.
I-Amplero: Indlela Engcono Yokunciphisa Ikhasimende Elimnyama
Feb 9, 2017 ngo-2: 35 AM
Siyabonga ngalezi zincazelo eziyisisekelo.
Sep 26, 2017 ku-11: 33 AM
Lokhu kuhle ngiyabonga mnumzane ngalolu lwazi.
Dec 6, 2017 ngo-1: 13 PM
Ngiyabonga ukuthi uthumela lolu lwazi - ngazibuza ukuthi kusho ukuthini ukuphumula isikhathi eside! 🙂
Dec 13, 2020 ngo-6: 44 PM
Ekugcineni (ekugcineni!) Isifinyezo esifushane sokuthi zonke lezi ziqubulo ezizwakalayo ezethusayo zisho ukuthini. Siyabonga ngokusebenzisa ulimi olucacile noluqondile, umphumela = ikusasa elibukeka likhanya kancane kulo mthuthukisi wezitshudeni.
Dec 14, 2020 ngo-3: 40 PM
Sawubona Vic, yebo… ngiyavuma. Amagama ayethusa. Ngiyakhumbula okokuqala lapho ngenza isicelo ku-API futhi konke kwachofoza futhi angikholwanga ukuthi kwakulula kangakanani empeleni. Ngiyabonga!